Mahotera, Kufamba neKushanya: Kugadziridza kune Ichokwadi Chaicho
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » wedzero » Mahotera, Kufamba neKushanya: Kugadziridza kune Ichokwadi Chaicho
Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
rakanyorwa Kaushal Gandhi - FABgetaways
Kupfuura chete mwedzi wapfuura, pamberi pe coronavirus wave, vazhinji vedu takagara mumahofisi edu takakomberedzwa nevamwe vatinoshanda navo, tichiita hurukuro dzakadzama nezve nzira yekuwandisa kudiwa kuri kuwedzera mumahotera, kufamba uye kushanya gore rino. Sekureva kweiyo UN World Tourism Organisation's (UNWTO's) fungidziro kubva kutanga kwegore rino, vashanyi vekunze kwenyika vaitarisirwa kukura ne4% muna 2020, izvo zvisina kukura sekukura kunoonekwa mu2017 (7%) uye 2018 (6%) , asi zvaive zvichiri kukwana kuenderera zvichikurudzira indasitiri yekushanya, iyo inopa ingangoita 10.4% yeGDP yepasi rose uye angangoita mamirioni 319 emabasa.
Isu takanga tisingazive nezvekutyisidzira kuri kuuya kweCOVID-19 denda repasirese. Asi izvo, zvikamu zvakati wandei zvepasi zvakakundikana kucherechedza hutachiona hwakaita sekorona hwaive pedyo nekuunza zvinhu zvese kumhara, kusvika munaKurume 11, apo World Health Organisation (WHO) yakazivisa zviri pamutemo kunge denda. Hatina kumboziva kuti nyika yatinozomukira mangwana yaizove isingazivikanwe, uye hupenyu sekuziva kwedu kuti hungazovapo.
Migwagwa mikuru yakadururwa, ndege dzemumhepo dzakateyiwa pasi, maguta asina kumbobvira arara izvozvi awira mukutsumwaira kwakadzika, uye hofori dzehupfumi dzakasvitswa pamabvi. Pakati peiyi mhirizhonga yakanyarara, indasitiri yekufamba uye yekushanya inozviwana yabatwa muziso redutu seimwe yemabhizimusi akanyanya kurohwa. Icho chaicho chiito chekufamba chinozivikanwa kubatsira mukupararira kwecoronavirus, ndosaka parizvino yapararira nekukurumidza kune nyika dzinopfuura makumi maviri nematanhatu pasirese zvichikonzera kumisikidzwa kwekufamba kwakasimba nehurumende dzinoverengeka.
Sezvo indasitiri yekushanya ichiverenga kurasikirwa kwayo, UNWTO inofungidzira kuti denda rinozokonzeresa kuderera kweanosvika mamirioni mazana mana nemakumi mana emamiriyoni evashanyi vekunze, zvinosvika kuderera kwe440% mumatikiti ekushanyirwa epasi rose. Kuisa izvi mumaonero, indasitiri yekushanya icharasikirwa neUS $ 30 bhiriyoni muna 450, uye vanhu vanosvika mamirioni makumi manomwe nemashanu pasi rose vachasiiwa vasina mabasa. Zvichienderana nekuti mamiriro ezvinhu anochinja sei, UNWTO inogona kuramba ichiongorora huwandu uhu.
Nekusaziva kwese kwese kwakatenderedza, indasitiri inozvishingisa yega kune mamwe maonero - shanduko. Isu tave kuda kuona shanduko dzakakura mukufamba uye mapateni ezvekushanya uye maitiro evatengi.
Kufamba kwemubatanidzwa vs. kufamba kwekuzorora
Iko kudikanwa kwekuparadzaniswa munharaunda kunoreva kuti zvinotora kanguva vafambi vasati vanzwa vakachengeteka kuenda kunhandare yendege ine vanhu uye nendege. Kudzoreredza kwacho kunogona kukurumidza pakufamba kwemakambani nekuda kwekunge kuri kwakanyanya kukosha muchimiro, nepo kusiri-kwakakosha kufamba kwekuzorora kunogona kuve nehurefu hwekudzora.
Kufamba mudzimba vs. kutenderera kwenyika dzese
Kana imwe nguva yekuzorora ikatora ndege zvakare, vafambi vangangoda kuyedza mvura nenzvimbo dziri padyo nepamba, pamwe kunyangwe mukati mechairi chekutyaira. MaSingapore vakaita zvakanaka kune yekugara kunopihwa mukati meguta-nyika.
Kunyangwe hazvo emahombekombe uye epamusoro emahotera epamusoro ari iwo ari kukuvadza zvakanyanya izvozvi, ivo vane mukana wekuwanazve nekukurumidza kukurumidza. Kudzivirirwa uye hutsanana zvichave pamusoro pendangariro kune vafambi pavanenge vachisarudza hotera, ndipo panogona kuita chinzvimbo chakakosha chemahotera epamusoro.
Zvichipa shanduko dzinogona kuitika idzo indasitiri iri kutarisira, pane nzvimbo shomanene idzo mahotera angangoda kutarisisa kuti ave nechokwadi chekuchinja kwakatsiga kudzokera kumabasa.
Semhedzisiro yevafambi "kuenda kunzvimbo," mahotera akati wandei achazoda kushanyirazve misika yavo yakakosha sosi Muchiitiko chekuti mahotera ainyanya kutsamira pane imwe musika sosi, iyo yavanotarisira kuti haizotorwe kubva mune ramangwana, ivo vachazoda kutsvaga kumwe kunobva misika senge kudiwa kwepamba pachako hakukwanisi kutora nzvimbo. zvinodiwa mhiri kwemakungwa. Sehotera yakazvimiririra, izvi zvingaite sezvinotyisa, asi zvaizobatsira kuti ubate bhodhi rekushanya kwairi kuenda uye unzwisise zvirongwa zvavo kuti uenzanise zano maererano.
Sezvo uye apo mahotera anovhurazve, zvikwata zvevatengesi zvinoda kuongorora kuti ndiani chaizvo ari kuuya nemikova mumazuva mashoma ekutanga. Izvi zvichave zvakakosha kukurumidza kuona mashifts muzvikamu zvemusika uye kugadzirisa zano zvinoenderana.
Budget & kugovera zviwanikwa
Pasina mubvunzo, zvichibva pamashanduko mumisika sosi uye zvikamu zvemusika, mahotera anodikanwa kuti adzokere kubhodhi rekudhirowa uye vadzokerezve kwese macro uye madiki marongero egore. Kutanga kubva mukuvhiringidza zvikwata zvevatengesi zvekugadzirisa zvirongwa zvekushambadzira zvegore, zvese zvinoda kutariswa zvakare.
Kuparadzaniswa kwenzizi dzemari
Kusvikira makamuri emari anokwira achidzokera kumazinga ane mari (uye zvichadaro), mahotera anofanirwa kufunga kunze kwebhokisi uye otarisa kusiyaniswa kwenzizi dzavo dzemari. Kuchinja kwekutarisa kwaizodikanwa nezvikwata zvekutengeserana zvinowana maoko nezvikafu nezvinwiwa (F&B), misangano & mabiko, uye maspas, nezvimwe. Mahotera akati wandei akasvitsa mabasa ekuendesa kumba kusanganisira kuendesa masiginecha avo madhishi, madhiri, kunyange newaini yavaunganidzwa.
Nhoroondo, mahotera akasarudza gumbeze mutengo-kudonha mushure mechero dambudziko rave kutambura kuti riwanezve avhareji zuva nezuva chiyero (ADR) kana angoda kuti mwero uwedzere. Nekudaro, dambudziko iri rakasiyana nechero rimwe, uye tinogona kufunga kuti vazhinji veavo vanoda kufamba munguva pfupi iri kutevera vanogona kunge vachikuvadza mari, uye kudzikisirwa kunogona kungovakurudzira kuti vafambe. Kuti udzivise kuderera kwemitengo, mahotera anofanirwa kuchengetedza mitengo yeruzhinji munzira dzawo pamwe neOTA asi anogona kutarisa mukutengesa pasina kupokana nemaonero avo.
Nekuyerera kwemari kuri munjodzi, mahotera anofanirwa kutarisa kune dzakaomarara mashandiro, zvishoma kwenguva pfupi. Maketani akati wandei mahotera anotarisa kuchengetedza kuyerera kwemari akaburitsa zvirongwa zvehurlough kwemazana ezviuru evashandi vavo.
Panguva ino, kuti denda iri richapera sei kufungidzira kweumwe munhu. China, kwakatangira denda uye nyika yekutanga kuti yakataura kuti COVID-19 iri pasi pekutonga uye nekudzikamisa zvishoma nezvishoma zvirambidzo zvekufamba, iri kuona zviratidzo zvekutanga zvekupora nekuwedzera kwekuchenjera kwekubhururuka nendege kubhuka, zvichimiririra kupenya kwe tariro yezvese zvepasi.
Mumakore achangopfuura, indasitiri yepasirese yekufambisa neyekushanya yakatarisana nematambudziko mazhinji, kusanganisira kurwiswa nemagandanga, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, njodzi dzinongoitika dzega, uye kudzikira kwehupfumi, kungodoma mashoma. Zvakangodaro, indasitiri yatora zvese izvi nhanho. Nekusimba, yakarwa ikadzokera kumusoro. Saizvozvo, izviwo zvichapfuura.